Man United oo guul soo laabasho ah ka gaartay Arsenal oo marti u ahayd, xilli Ronaldo uu gaaray goolkiisii 800-aad… +SAWIRRO – Gool FM
Man United oo guul soo laabasho ah ka gaartay Arsenal oo marti u ahayd, xilli Ronaldo uu gaaray goolkiisii 800-aad… +SAWIRRO
Dajiye December 2, 2021
(Manchester) 02 Dis 2021. Manchester United ayaa ku garaacday garoonkeeda Old Trafford kooxda Arsenal oo marti u ahayd, kaddib markii ay kaga adkaatay 3-2, ciyaar qeyb ka ahayd kulammada horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee ciyaarta ayeey labada kooxood Manchester United iyo Arsenal ku kala nasteen barbardhac 1-1 ah.
Daqiiqadii 14-aad kooxda Arsenal ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 0-1 ka dhigay Smith-Rowe kaddib markii uu caawin ka helay saaxiibkiis Mohamed Elneny.
44 daqiiqo marka ay dheesha mareysay kooxda Manchester United ayaa dhalisay goolka barbardhac kaddib markii uu 1-1 ka dhigay Bruno Fernandes oo caawin ka helay Fred.
Daqiiqadii 52-aad Manchester United ayaa hoggaanka u qabatay dheesha waxaana 2-1 ka dhigay ciyaarta Ronalod kaddib markii ay caawin qurux badan kaga timid saaxiibkiis Rashford, Cristiano ayaana sidaas ku gaaray goolkiisii 800-aad ee xirfadiisa ciyaareed kubadda cagta.
Laakiin 55 daqiiqo marka ay mareysay Arsenal ayaa dhalisay goolka barbardhaca waxaana 2-2 ka dhigay Martin Ødegaard oo ay caawin kaga timid Martinelli.
70 daqiiqo marka ay ciyaarta mareysay Manchester United ayaa loo dhigay rigoore waxaana gool u badelay Cristiano Ronalod, dheesha ayaa sidaas ku noqotay 3-2 ay ku hoggaamineysay United-ka.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku dhammaatay 3-2 ay kaga adkaatay Manchester United kooxda Arsenal oo ku soo booqatay garoonka Old Trafford, Red Devils ayaa guushaan waxay soo fariisatay booska 7-aad ee kala sareynta horyaalka Premier League.
Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Man United iyo Arsenal ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Allegri oo Ronaldo kaga xanaajiyay hadal kulul oo ku saabsan Messi